Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxyo Waawayn oo Gilgilay Qaybo Kamid Ah Gobollada Oromia & Axmaada
Banaanbaxyo Waawayn oo Gilgilay Qaybo Kamid Ah Gobollada Oromia & Axmaada
Posted by Dulmane	/ September 29, 2016
Wararka naga soo gaadhaya Gobolada Oromada iyo Axmaarada ayaa sheegaya in ay mudaharaadyo waawayn gilgileen qaar kamid ah Gobolada Oromia iyo Axmaara, Sida aan xogta kuhelayno dibad baxyadan ayaa ahaa kuwo rabshado wata waxayna gaysteen khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaadhay mudaharaadayaasha iyo ciidanka gumaysigaba.
Magaalooyinka Dabrebirhan, Ziway iyo Shashamane ayaa lasheegayaa in ay yihiin kuwa ugu daran ee banaan baxyada waawayn ee lagaga soo hor jeedo xukuumada gabalkeedii dhacay ee TPLF ay kasocdaan, sidoo kale waxay banaan baxyo kajiraan qaar kamid ah Gobolada iyo Dagmooyinka Axmaadara iyo Oromada.
Banaan baxyadan udambeeyay ayay ciidanka gumaysiga Itoobiya isticmaaleen awoodii ugu dambaysay waxayna dadka kuridayeen rasaas nool iyagoo si aabayeel la’aan ah rasaasta u ridayay waxaana goobta kadhacay dhimasho iyo dhaawac badan oo aan wali lacayimin.
Banaan baxyada lagaga soo hor jeedo taliska TPLF ayaa socda mudo sanad ah waxaana maalinba maalinta kadambaysa siibadanaya dadka kusoo biiraya mudaharaada yaasha waxaana jira gobolo hor leh oo hada laga bilaabay banaan baxyada.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha ayaa ku guul daraysatay in ay si uun u xakamayso dibad baxayaasha waxaana fashil ku dhamaada qorsho kasta oo ay isleeyihiin waxaad kuyarayn kartaan kacdoonka sida xoowliga ah usocda.
Sidoo kale waxaa todobaadkan gudihiisa ka baxsaday wadanka Itoobiya dad caan ah sida Jilaagii caanka ahaa iyo suxufiyiin magac kulahaa wadanka iyo waliba dad kale oo caan ahaa waxayna dhamaan isu dhiibeen dowladaha ree galbeedka.